Ahoana ny fanamboarana ny jiron'i Kitt (Ilay fiara mahafinaritra) - Ikkaro
Krismasy manokana: Fomba fanamboarana lanezy volomparasy
firosoana >> elektronika >> Ahoana ny fanamboarana ny jiron'i Kitt (Ilay fiara mahafinaritra)
Salama, misaotra betsaka anao namaky anay. Amin'ity indray mitoraka ity dia hasehoko anao ny fomba fanao iray izay tena azo sary sy azo tsapain-tanana. Ny ankamaroan'ny fomba fanao dia tsy azo jerena afa-tsy amin'ny fitaovana fandrefesana, hita amin'ny LED izany.
Eritrereto ny seho iray tamin'ny taona 80 tany ho any nopotehan'ny polisy, mpiaro ny atletisma ary fiara tsy mampino misy jiro miavaka eo alohany, satria io no andiany. Kitt, ilay fiara mahafinaritra
Andao hojerentsika izao ny fomba fanaovana ny jiron'i Kitt, ilay fiara mahafinaritra miaraka amin'ny LED mba hahafahanao mampiasa azy ao anaty fiara na ao an-trano. Ho fampitandremana dia tsy sarotra izany rehetra izany, eto Ikkaro dia asehonay anao ny fomba hanaovana azy handany vola kely sy ao anatin'ny fotoana fohy. Manantena aho fa tianao izany.
Aseho aloha ireo kisary mba hitan'izy ireo fa tsy misy antony anoratana an-trano izany.
Avelako ho tsotra be ilay kisary.
Mora hita ireo fitaovana, amin'ny fivarotana elektronika rehetra no amarotany azy ireo.
Loharano 1 an'ny volts 5 (nampiasa iray nitovy amin'ilay namboarinay tamin'ny lahatsoratra farany aho)
Takelaka fanaovana mofo 1 na tabilao fanaovana fampiharana.
50cm tariby an-tariby hanaovana ny fifandraisana.
LED mena 16
16 330ohms resistors
2 LRD na fanoherana 1 an'ny 47kohm sy 1 an'ny 52kohm.
Mpampitohy 1 an'ny microfarads 10 na microsar 22 na 47 dia afaka milalao ny soatoavina isika mandra-pahitantsika ilay tadiavina.
Kaontera binary 1 an'ny 1 zavona74. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/193/90_DS.pdf
1 74ls154 hex decoder. http://www.dte.eup.uva.es/j_m_mena/digivhdl/pdf/deco-7.pdf
Ary vavahady 1 74ls00 izay nand (raha ny amiko dia nampiasa 2, 74ls08 ary 7404 aho handavana ny fivoahan'ny lojika). http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74F00.pdf
Ireo no fitaovana ilaintsika.
Mivory izahay araka ny kisary. Aza adino ny mahita ireo datasheets hampifandray tsara ireo famatsian-jiro.
Azavaiko kely ny lojika,
oscillator lm555 amin'ity tranga ity miaraka amin'ny fikirakira azy tahaka ny astable dia hanome ny pulsa miaraka amin'ny hatetika omen'ny resistors 52 sy 47k miaraka amin'ny capacitor an'ny sanda tadiavintsika,
Ny output 3 an'ny 555 dia mankany amin'ny input NAND ary ny input hafa dia avy amin'ny led voalohany sy farany.
Ny vokatra dia mandeha amin'ny NAND tsirairay mba hanisa sy hidina ny 74193,
Ny fivoahan'ny 74193 dia mifandray mivantana amin'ny encoder 74154 ary ny vokariny dia ny LED, fa raha tsikaritrareo fa mifamatotra amin'ny lalana hafa izy ireo dia satria ambany ny haavony.
samy manana ny fanoherana ary ny fanoherana tsirairay dia 330ohm,
Amin'ny vokatra voalohany sy farany, izany hoe, q1 sy q17 an'ny 74154 dia manana ny napetraka sy ny famerenana ny flip-flop isika
ary ny output flip-flop dia mankany amin'ny vavahady NAND izay misy fahan'ny pulsa ary noho izany dia mihetsika ny count up rehefa tonga any amin'ny ambany indrindra ny signal ary mihetsika ny count down rehefa tonga any amin'ny avo indrindra ny pulse.
Eto dia efa mipetaka ny jiro KITT.
Manantena aho fa andramanao izany, ho an'ny vao manomboka ary manome valisoa be dia be.
Ary avelako ho anao ny horonantsary misy ny jiron'i Kitt, nandany antsasak'adiny teo aho vao nanao ny zavatra rehetra, manantena aho fa tianao izany.
Misaotra anao aho noho ny hevitrao momba ny fanontaniana rehetra hamahana izany ho an'ny rehetra ary hiara-manangana fahalalana miaraka amin'izany.
[nasongadina] Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Zaifehr ho an'i Ikkaro [/ nisongadina]
Ahoana no hanaovana rano distilled
Tantaran'i Espana avy amin'i Arturo Pérez-Reverte
Ahoana ny fampandehanana rakitra .py
Sokajy elektronika Ticket navigation
Famatsiana herinaratra tsy azo ovaina
Fanehoan-kevitra 9 momba ny "Fomba fanamboarana ny jiron'i Kitt (Ilay Fiara Fantastic)"
31 Janoary 2014 amin'ny 3:51 hariva
ny fanoherana ny sary? fanoherana inona no misolo ny fiaramanidina ???
10 Febroary 2015 amin'ny 12:00 maraina
Lavorary, hanao aho.
24 Febroary 2015 amin'ny 1:49 hariva
Tsy hita ny isan'ireo nampidirina, ary efa nangoniko daholo ny zava-drehetra ary tsy mandeha izy. NY ATAOKO?
21 Oktobra 2015 amin'ny 2:26 maraina
Azonao atao ve ny mandefa ahy ny sarin'ilay sary, tsy dia takatra loatra izay eto
Jose Luis Zayas placeholder image
13 Desambra 2015 amin'ny 11:37 maraina
Raha manana ny sary aho. Ary mandeha izy satria natambatra, tsy haiko fotsiny ny mandefa azy.
13 Desambra 2015 amin'ny 11:46 maraina
Raha ny marina, dia teny izay midika hoe presiso, amin'ny fitenintsika, anisany ny anglisy, dia io ihany no tsy ampiasaina amin'ireo teny ireo any Etazonia fa azo ampiharina ho toy ny antsy satria mameno ny tena anaran'ny antsy izay ampiasain'ny mpiasa matetika amin'ny drywall. . Vetivety dia mora foana ny manapaka amin'ilay hareza manana maso kely sy tantanana amin'ny tanana iray manontolo ary io no antsoina hoe antsy marina fotsiny ary nohafohezina dia lazaina fa marina, takatra fa manalefaka izy, na azonao vinavinaina.
5 aprily 2016 amin'ny 5:37 hariva
Efa nataoko miasa izy ary mahomby tokoa, izao dia hanomboka hampihatra amin'ny famelabelaran-takelaka, tsy haiko raha afaka noho ny faharetana takiana, fa hanomboka aho.